Bara barnoota Dhaabbilee Barnoota Olaanoo gara 2013 darbu danda'a jedhame
2 years ago 3826 Qoodi
Tatamsa'ina weerara COVID-19 yeroo gabaabaa keessatti too'achuu yoo hin danda'amne dhaabbileen barnoota olaanoo sagantaa barnoota isaani gara bara barnoota itti aanutti darbu akka danda'u Ministeera Saayinsii fi Barnoota Olaanoo beeksise.
Hoogganaan Sab-qunnamtii Dhaabbata Barnoota Olaanoo obbo Dachaasaa Gurmuu akka himanitti, hanga ammaatti haala adeemsa barnoota Yunivarsiitiiwwan akkamitti ta'u akka qabu fi gara adeemsa baruuf barsiisuu idileetti deebi'u irratti hin murtoofne.
Vaayirasiin Koronaa Ityoophiyaa seenu Ministeera Fayyaan ifa kan ta'e Bitoteessa 2/2012 yoo ta'u, achiin booda guyyoota 15f barattoonni mooraa keessa turan. Haa ta'u malee barattoonni gara dhufanitti akka deebi'an erga godhame guyyaa 15 waan ta'eef murtoon irra hin geenye jedhaniiru.
Akka yaadametti tatamsa'ina weeraricha yeroo gabaabaatti too'achuu yoo hin danda'amne fi weerarichi yoo hammaachaa dhufe, barattoonni gara Yunivarsiitii deebi'uun isaani miidhaa hamaa geessisuu waan hin oolleef yeroon barnoota gara bara 2013 darbu danda'a jedhaniiru.
Gama biraatin tatamsa'ina weeraricha yeroo gabaabaa keessatti too'achuu yoo danda'ame yeroo boqonnaa (ganna) fayyadamuun gara bara 2013 osoo hin darbiin sagantaa baheefin xumuruuf yaadameera jedhan.
Madda: Addis Maaladaa
Barnoota COVID19 Yunivarsiitii
Nov. 27, 2020, 4:34 a.m.
Barattuun kutaa 9ffaa dandeettii addaa qabdu badhaasa addaa Yunivarsiitii Jimmaa argatte
"Guutuu Oromiyaatti barnoonni Wiixata dhufurraa kaasee ni eegala" - Biiroo Barnoota Oromiyaa
Oct. 31, 2020, 4:08 p.m.
COVID-19: “Sababa koviid-19n duuti ogeessota fayyaa dabalaa jiraachuun yaaddessaadha”